Murume anodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kuda kusvirwa - Nhau Dzevakuru
Varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa! Kana murume akaneta musana ndoitawo sei? Kuneta musana zvinoreva kuti murume haasi kugona basa pabonde. Anonetsa kukwezva. Anoona mukadzi wake semunhu akangomirira kubika nekuwacha nekurera vana nekutsvaira mumba, pasinawo umwe muripo unganzi haa nhasi mukadzi anakirwa nemurume wake.
Chekutanga tsvagai chikonzero chirikuitisa murume ave nehusimbe pakusvirana. Usahwande, mubudire pachena kuti zviri kufamba sei asi usapopote.
Kana wawana nguva yekutaura naye tanga nekumurondedzera nyaya yekuti unomuda chose. Kana anzwisisa ipapo chirondedzera kuti zviri kukurwadza kugara nemunhu waunoda kudai mumba asi achigara ari kure newe. Rondedzera kuti kunzi mukadzi wemumba zvinoreva kuti chimwe chikuru chinangwa chemukadzi kuratidzwa rudo nemurume wake zvinova zvinosvika kumubhedha sekuti kana kamwe chete hako pazuva zvimwewo kaviri kana katatu unongoda. Asi wanga wakamirira nguva yese iyi hausi kunyatsoona kuti murume wako ari kufungei.
mukadzi kumbirawo kusvirwa
Previous articleNdakaibairira mboro kumberi kusvika ndakunzwa akugomera nekunakirwa
Next articleNdakafongoreswa naSolo achibva andisvirwa nyoro chaiyo